သက်ဝေ: အိတ်မှောက် ဖာသွန် နှစ်ဆယ့်ခွန်
Posted by သက်ဝေ at 2:30 PM
idea က အရင်ကလုပ်နေတဲ့ စလင်းဘက်ထဲမှာ ဆုိုတဲ့ ကဏ္ဍလေးအတွက် ဓာတ်ပုံရိုက်ရမှာ :D
သူများကိုပြောရင်း ကိုယ.့်အိတ်ထဲပြန်ကြည့်တော့ အင်းး အယ်ဒီတာအိတ်က ပိုဆိုးသေးးးး :(
Thandar Lwin August 27, 2013 at 2:45 PM
ညီမ အိတ်ထဲမှာ ထီး၊ ပရုတ်ဆီ ၊ ဝေါလက်တစ်ခု ၊ သော့တွဲ တစ်တွဲ နဲ့ တစ်ရှူးတစ်ထုတ်ပဲရှိတယ် ။ အမ ရေဘူးလေးက အလေးဆုံးနေမှာ ...
rose of sharon August 27, 2013 at 2:52 PM
ဆုမြတ်မိုး August 27, 2013 at 2:58 PM
ဆုမြတ်အိတ်လည်းရှုပ်ပွထနေတာပါပဲ....ရေမွှေးတွေ၊ handcream တွေ ၊ စာအုပ်တွေ ၊ ဘာတွေမှန်းမသိတော့ဘူးး) စိတ်ရှုပ်လို့တခါမှမရှင်းဘူးး) ပခုံးနာသက်သာအောင် အိုင်ပတ်ကြီးကို သာမီးကိုပေးပါလားဟင်...ခွိ....း)
ညီလင်းသစ် August 27, 2013 at 3:30 PM
အိတ်ထဲမှာ ကြံကြံဖန်ဖန် ကင်မရာထဲ ထည့်ရတဲ့ SD card တစ်ခုပါ ပါသေးတာကို သဘောကျနေတာ..၊ ဘယ့်နှယ်.. ကင်မရာအိတ်လည်း မဟုတ်ဘဲနဲ့...၊း))
“အမျိုးသမီးတွေရဲ့ စလင်းဘက်အိတ်တိုင်းဟာ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ် ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်စီ ဖြစ်ကြတယ်” လို့ပဲ တင်စားလိုက်ချင် မိတော့တယ်ဗျာ...။း)
Adora etc. August 27, 2013 at 4:02 PM
အမရေ အများကြီးပဲနော်။ အိမ်ရောက်ရင် အိတ်သွန်ဖာမှောက်လုပ်ပလိုက်မယ်။ ပြီးရင်မမကိုပြန်လာပြောမယ်
Cameron August 27, 2013 at 4:40 PM
အားပါးပါး မမသက်ဝေအိတ်က လေးလဲလေးလောက်ပါတယ် တကယ်တကယ်အစုံပလုံစေ့လို့... ရေးမယ်ကွယ် ဒီတဂ်ပို့စ်လဲ..။
ညိုလေးနေ August 27, 2013 at 4:55 PM
သွန်လိုက်ပြီ မမ ... ဟီးးးး :)
မြသွေးနီ August 27, 2013 at 6:57 PM
ဒီည သွန်ပြီး မှောက်ကြည့်ဦးမယ်.. အဲ့ဂလောက်များမလားမသိ..
စကားမစပ်..အိတ်ကလေး လှတယ်... :)
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! August 28, 2013 at 1:22 AM
မမရေ... အိတ်လေးငှားလို့ ရမလားဟင် ..:P ဒါပေမယ့် ငှားပြိးရင် မေ့တတ်တာလေးတော့ သည်းခံနော်မမ ..:D တဂ်ပို့စ် ရေးပြီးပါကြောင်းမမရေ.. :)
ရိုးမြေကျ August 28, 2013 at 2:16 PM
အိုမမပခုံးလေး သနားပါတယ်။ အများကြီးလွယ်ထားရမယ်။ နေဦး။ ရုံးပိတ်ရက်မှ အိတ်သွန်ကြည့်လိုက်ဦးမယ်မမရေ။
Unknown August 28, 2013 at 5:47 PM
Su August 28, 2013 at 5:57 PM
မမသက်သက် အရမ်း တော်တယ်
ဟိုးတုန်းက baglady website က what's in my bag ဆိုတဲ့ post လေးတွေကိုလွန်းနေတာ
သမြားကတော့ မဘလော့ တော့ ရေးတော့ဘူးနော်
သမြားအိတ်ထဲမလဲ ကလေး diaper တွေwetwipe တွေ နဲ့ cereal အမျိုးစုံ ပွစိနေတာလူသိမစိုးလို့ :P
ကြယ်ပြာ August 28, 2013 at 9:12 PM
ပစ္စည်းတွေအများကြီးပဲနော်း)ဖတ်လို့ကောင်းလိုက်တာ အစ်မသက်ဝေ
တန်ခူး August 29, 2013 at 8:12 PM
သက်ဝေရေ. အလုပ်ရှုပ်နေတာနဲ့ တက်ဂ်ပို့ စ်လေးခုမှ ဖတ်ဖြစ်တယ်. ဖတ်ပြီးပြီးချင်း ကိုယ့်အိတ်ကိုချိန်ပြီးမှောက်ချချင်စိတ်တွေဖြစ်သွားတယ်. ဟိုတလောက လည်ပင်းတွေနာတုန်းက အိတ်ထဲကပစ္စည်းတွေရှင်းဖြစ်တယ်. ခုများမရှင်းတာအတော်ကြာတော့ အမှိုက်ပုံးတပုံးလိုပဲ. Take care
လရိပ်အိမ် August 29, 2013 at 9:50 PM
အိတ်သွန်ဖာမှောက်အကြောင်းဖတ်ရတာ စိတ်ဝင်စားစရာဘဲ။ ပစ္စည်းစာရင်းဖတ်နေတာ ဘယ်တော့ပြီးမလဲလို့ အရှည်ကြီးဘဲ။ ပစ္စည်းထည့်ထားတာ အတော်များတယ်နော်။ ဒါတောင် အမ က ကားမောင်းလို့။ မဟုတ်ရင် တော်တော်သယ်ရမယ်။
blackroze August 30, 2013 at 1:32 AM
မကြီး အိတ်ထဲလည်း ပစ္စည်းတွေက အစုံဘဲ...
San San Htun August 30, 2013 at 2:53 AM
အစ်မ အိတ်က အတော်လေးမှာပဲ..စုံစိနေတာပဲ..အိတ်လေးလှတယ်...ပခုံးနာတာလည်း အမြန်သက်သာပါစေ...
ကြည်ဖြူပိုင် September 2, 2013 at 11:17 PM
မမရေ ကွန့်မန့်လေးမှာအိတ်မှောက်ခိုင်းတာလေး မနေ့ကဝမ်းနည်းလို့မရယ်ချင်။ဒီနေ့မှပြန်ဖတ်ပြီးရယ်ချင်လာလို့ မမကိုပြန်လာပြောတာ။ အနော့်အိတ်ကို ဒီမှာပဲလာမှောက်လိုက်ပြီ။ :D ချည်သားကျောပိုးအိတ်ကိုဖွင့်ပြီးသွန်ချလိုက်တာ။ ထီးရယ်။ဘဏ်ကဒ်ရယ်။ဗိုက်ဆာရင်မုန့်ဝယ်စားဖို့ခြေစောင့်လက်စောင့်ထုတ်ထားတဲ့ ၂၀ရယ်။ MRTCard ရယ်။ Ibanking device ရယ်။ မုန့်တမျိုးမျိုးရယ်။ရှိတာအကုန်ထုတ် ဘိန်းမုန့်ပဲ။ ပြောင်ပြီ။ ရှိတော့ဘူး။ (btw, comment reply မှာသိပ်နေမကောင်းဘူးလို့ ဖတ်လိုက်ရတယ်။ဒီနေ့မိုးလည်းအေးတယ်။ကျန်းမာရေးကိုဂရုစိုက်ပါနော်။နေကောင်းပျော်ရွှင်ပါစေ။ <3 Good night :)
ကြည်ဖြူပိုင် September 2, 2013 at 11:18 PM
ကြည်ဖြူပိုင် September 2, 2013 at 11:21 PM
စာလုံးပေါင်းမှားသွားလို့ပြန်ဖျက်တာ။ ပို့စ်တိုင်တယ်လ် : စက်တင်ဘာ နှစ် အိတ်သွန်ပစ် :D နောက်တခါ ခေါင်းစဉ်မှပဲရေးတော့မယ်။ ဒီခေါင်းစဉ်အတွက် ချည်အိတ်မလျှော်ဖြစ်သေးလို့ ညစ်ပတ်နေလို့ :D